साझा बसमा ‘स्मार्ट ट्राभल कार्ड’को प्रयोग, - ICT Frame Technology
काठमाडौं । ‘स्मार्ट ट्राभल कार्ड’ को प्रयोग साझा यातायातले आफ्नो बसमा सुरु गरेको छ । लामो समयको परीक्षणपछि साझाले लगनखेलबाट नयाँ बसपार्क जाने १० बसबाट ट्राभल स्मार्ट कार्डको प्रयोग सुरु गरेको हो । यसका लागि ति सबै बसमा स्मार्ट कार्डबाट भुक्तानी लिने मेसिन जडान भएर कार्डबाटै भुक्तानीको सेवा सुरू भएको साझा यातायातका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।‘अब सर्वसाधारणले यो रुटमा चढ्दा स्मार्ट कार्डबाटै भाडा तिर्न सक्नेछन्’ पाण्डेले भने । बसका ढोकामा स्मार्ट कार्डको डिभाइस राखिएको छ । अब सो रुटमा नियमित यात्रा गर्ने सर्वसधारणले पनि स्मार्टकार्ड किन्न पाउने छन् । यसको प्रयोग स्वेच्छिक हुनेछ ।सुरुवातमा एउटा रुटबाट सुरु गरिएपनि विस्तारै सबै रुटमा चल्ने बसमा यो सेवा सुरुवात गरिनेछ । बस चढ्दा यो कार्ड पछिल्लाे ढोकामा जोडिएको डिभाइसमा देखाउनुपर्नेछ भने ओर्लिँदा पनि यसलाई देखाउनुपर्नेछ ।
आफैं यात्रा गरेको दूरीअनुसार भाडा काट्नेछ । यदि झर्दा कार्ड डिभाइसमा नदेखाए स्वतः २५ रूपैयाँ काटिनेछ । देखाएमा भने दूरीअनुसारकै भाडा काट्नेछ । स्मार्ट ट्राभल कार्ड गाडी भाडा भुक्तानीमा प्रयोग हुने कार्ड हो । यो कार्ड एक महिनापछि साझा यातायातले आफ्नै कार्यलयबाट बिक्री सुरु गरेको छ । सुरूवातमा १ सय वटा कार्ड किन्नेलाई २ सय रूपैयाँमा २ सय ब्यालेन्स भएको कार्ड दिइँदैछ । यसपछि भने सुरूवातमा कार्डको मूल्यबापत १ सय ५० रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।यो कार्ड लिएर हिँडेका यात्रु चढेको र झरेको दुरीका आधारमा ढोकामा जोडिएको डिभाइसले स्मार्ट कार्डबाट रकम काट्नेछ ।यसको रिचार्जका लागि साझाको कार्यालयमै सम्पर्क गर्न सकिने छ । बसका सहचालकलाई रकम बुझाएर पनि कार्ड रिचार्ज गर्न सकिन्छ । पछि रिचार्जका लागि अझै सरल ब्यवस्था गरिनेछ ।काटिएको रकम नेपाल बैंकको साझा यातायातको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । केही समयपछि उपभोक्ताले साझाका रिचार्ज कार्ड मोबाइलको जस्तैगरी बजारमा किन्न पाउनेछन् । यसले यात्रुलाई दुरीका आधारमा भाडा तिर्न सहज हुने पाण्डेयले जानकारी दिए ।
Source:- onlinekhabar dot com
Previous Post Previous post: नेपाल टेलिकमको होली अफर
Next Post Next post: सगुनमा विश्वब्यापी रुपमा लगानीकर्ताको उत्साहनजनक सहभागिता
कति भयानक हो अहिलेको साइबर आक्रमण ?
Repoter Chiranjibi Adhikari May 14, 2017 May 14, 2017 0
सामाजिक संजालमा छुट्टै निर्वाचन गर्नु पर्ने देखियो !
ओप्पोद्वारा सेल्फी केन्द्रित नयाँ फोन ‘ए ७१’ सार्वजनिक गर्ने घोषणा
Repoter Chiranjibi Adhikari September 14, 2017 September 14, 2017 0